အခြား | Pyithu Hluttaw
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အသစ်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့်ဥပဒေများ အနက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ဥပဒေများအားလေ့လာခြင်း
ICJ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် စဉ်းစားသုံးသပ်ဆဲ GSP နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီမှ “ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ နှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်ကို အခြေခံသည့် မူဝါဒများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အတွက် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ” ရေးသားပြုစုခဲ့ခြင်းအား အများပြည်သူ အကြံပြုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြအပ်ပါသည်
e-Government ဖော်ဆောင်မှုတွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍ၏ အရေးပါမှု
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသည့်သူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း ၁၉ -၁၂ -၂၀၁၉
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသည့်သူများစာရင်း(၂၅.၁၁.၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသည့်သူများစာရင်း(၂၂.၁၁.၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၃) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၂) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၁) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၀) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၉) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမေန႔သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတၱမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ျပည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်ေျမာက္ပုံမွန်အစည်းအေဝး ပထမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူမ်ားစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ျပည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်ေျမာက္ပုံမွန်အစည်းအေဝး (၁၆)ရက်ေျမာက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူမ်ားစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာမည့်သူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမေန႔သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမေန႔သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၅) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၄) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၃) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၂) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၁) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၀) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၉) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက်မြောက်နေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမ နေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့သို့လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၉) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
လွှတ်တော်ရုံးများ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးရပ်နားစဉ် လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း (၈.၆.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးရပ်နားစဉ် လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း (၁၀.၄.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးရပ်နားစဉ် လာရောက်လေ့လာ သူများစာရင်း (၆.၄.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးရပ်နားစဉ် လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း(၅.၄.၂၀၁၈)
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၂) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၉) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၈) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၇) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၆) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၅) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၄) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၃) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၂) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၉) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက်မြောက်နေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့သို့ လာရောက်လေ့လာသူများစာရင်း
ဇေယျာသီရိမြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများမှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ကြသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ အောင်ချက်အကောင်းဆုံး ကျောင်းများအား ပညာရည်ချွှန်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှ အမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတွေ့ဆုံ
လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက် နှင့် စာဖတ်ခန်းများအား စာအုပ်များလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ AIPA တက်ရောက်လာ သည့် ပါလီမန်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ နေပြည်တော်တစ်ဝိုက် ဆက်လက်လေ့လာ
Committee on Women Parliamentarians of AIPA အစည်းအဝေးပွဲ ကျင်းပ
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ ကျင်းပ
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
လွှတ်တော်ရုံးများ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်
လွှတ်တော်ရုံးအသီးသီး၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုမှ ရေးသားပြုစုထားသော မူဝါဒအကြံပြုစာတမ်းများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေ(ရသေ့တောင် မဲဆန္ဒနယ်) က ၆. ၅. ၂၀၁၆ ရက်နေ့၌ တင်သွင်းသော အရေးကြီးအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က လွှတ်တော်သို့အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့က ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် ဒုတိယသမ္မတ အမည်စာရင်း ကြေညာ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လမ်းညွှန်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လက်စွဲ စာအုပ်များ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အစီအစဉ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ သူရဦးရွှေမန်း ကပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက အဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင် မည့်အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း အား ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်မှတ်တမ်းများပြသရှင်းလင်း
မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အသီးသီး၏ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးများခေါ်ယူကျင်း ပနိုင်ရေးအတွက်ဗဟိုကော်မတီနှင့်လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကျင်းပ
UNDP နှင့် လွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးပူးပေါင်း အဖွဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက ဖတ်ကြားသည့်စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်မှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ကရင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဓနုတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ မှ ဖတ်ကြားသည့်စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ ပေးပို့သော ဖတ်ကြားသောစာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားတွင် မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်မှ ဖတ်ကြားတင်သွင်းသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဖလုံ၊ စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားးစုပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုုပ်မှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားသို့ သဝဏ်လွှာပေးပို့
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားသို့ သဝဏ်လွှာပေးပို့
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် “ဝ” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် (စဒက) က ဖတ်ကြားသည့်စာတမ်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် တအောင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီက ဖတ်ကြားသည့်စာတမ်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး တို့၏ ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက်၊ နှစ်သစ်မင်္ဂလာအခါတော်နေ့တွင် နေပြည်တော် ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၌ အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်နာယူခြင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်သို့ စာအုပ်လှူဒါန်း
ဗိုလ်ချုပ် နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အခမ်အနားအစီအစဉ်(လျာထားချက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း (၆၈) ကြိမ် မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ ညစာစားပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်ချီးမြှင့်
ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်များ၏ စတုတ္ထနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် နေ့လယ်စာ စားပွဲကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ Telenor နှင့် Ooredoo မှ တာဝန်ရှိသူများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် ဂျာမန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (GIZ)တို့အကြား ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအား အထောက်အကူပြုရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် ဟန်ဆိုဒ်ဒယ်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည့် အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး
(၁၃၁)ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ ညီလာခံနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေကြမ်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ဂျာမနီနိုင်ငံ အခွန်စနစ်နှင့် ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
၂၀၁၄ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ
ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး အထိမေးခွန်း၊ အဆိုနှင့် ဥပဒေကြမ်းများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှဒသမပုံမှန် အစည်းအဝေးအထိ မေးမြန်းခဲ့သော မေးခွန်းများ အရေအတွက်နှင့် ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးရက်စုစုပေါင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမည့်ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်ပေါ်ပေါက် လာစေရန် လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်(၁/၂၀၁၄)ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှုရှိမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် စနစ်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရေး အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး
ပြည်သူ့လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်သို့ World Bank မှ စာအုပ်များ လှူဒါန်းပွဲနှင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
လွှတ်တော်ရုံးများ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းနှင်‌့ အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်များနာယူခြင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အသက်ဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိသူ လူနာများအား အချိန်မီဆေးကုသနိုင်ရေးအတွက် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေး ရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင် ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၄/၂၀၁၄) ကျင်းပ
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်နယ်အစိုးရက ထောက်ခံတင်ပြထားသော စီမံကိန်း (၈)ခုအတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ခွင့်ပြု ကူညီပေးရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းများကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ မေးမြန်းခဲ့သော မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားပြီးစီးမှု အခြေအနေ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါလီမန်များ သမဂ္ဂ IPU မှ မြန်မာလွှတ်တော်သို့ Serverနှင့် ကွန်ပျူတာများပေးအပ် လှူဒါန်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်သာ ဂွမြို့နယ်ရှိဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ (Myanmar Parliamentary Union-MPU) အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၄) ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဆန်း (ပန်းဘဲတန်း မဲဆန္ဒနယ်) ကွယ်လွန်သည့်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း အရေးကြီးအဆို တင်သွင်း
ဆက်လက်ထုတ်ဝေမည့် ငွေစက္ကူများကို အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရုပ်ပုံများဖြင့် ထုတ်ဝေပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း အဆို
နိုင်ငံပိုင်သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကရောင်းချခဲ့သည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍တံဆိပ်ခေါင်းခွန်တိမ်းရှောင်မှုများအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့်ဒဏ်ငွေများပြန်လည်ကောက်ခံစေပါရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတအား တိုက်တွန်းကြောင်းအဆ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့် (လသာမဲဆန္ဒနယ်) ကွယ်လွန်
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး နဝမနေ့မှတ်တမ်း(၆-၁၁-၂၀၁၂)
ကလေးသူငယ်ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ၉/၉၃) ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို လက်ခံဆွေးနွေးရန် အဆို
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် တင်ပြသော တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ၏ စာတမ်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် တင်ပြသော စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ (ကချင်ပြည်နယ်)၏ စာတမ်း
၂၀၁၃ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် တင်ပြသော ‘ဝ’ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ စာတမ်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် တင်ပြသော ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၏ စာတမ်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှပေးပို့သော ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ
၂၀၁၃ ခုနှစ် “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့” အတွက် “ဖလုံစဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ” မှ တင်သွင်းသောစာတမ်း
၂၀၁၃ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်က ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၃ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီက ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၃ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ က ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ကိုယ်စားလှယ် မမေသူထွန်း ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ
ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (KSDDP) မှ ပြုစုပေးပို့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီစာတမ်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် တင်ပြသောအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ်၏ စာတမ်း
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမို ကရေစီနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဏာမတွေ့ဆုံရှင်းလင်း
လွှတ်တော်၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းလုပ်ငန်း (Parliamentary Function of Oversight)
ဦးမျိုးဆွေ၊ တနိုင်းမဲဆန္ဒနယ်မှတင်သွင်းခဲ့သော ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အရေးကြီးအဆိုအား ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်း ပညာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြတ်ဟိန်းမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း
ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်‌့ရဒေသ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ဟဲဇင်းကျေးလက် အမာခံကျောက်ချောလမ်းအား ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် စပ်လျဉ်း မေးခွန်း
နိုင်ငံတော်မှချပေးသည့် ရန်ပုံငွေဖြင့် ကျေး လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော ကုမ္ပဏီများက ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်ကဲ့သို့ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ရစ်ကန်ကြီး-ပင်လောင်း-သုံးခွ မြေသားလမ်းပြုပြင်ပေးပါက ဂဝံလမ်းအဖြစ် ခင်းပေးရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
စိုက်ပျိုးရေ အပြည့်အဝ ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင် စီမံကိန်းများရှိပါသလား၊ ရှိပါက မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ကို သိလိုခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ စတင်ကျင်းပ
နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေဖြင့် ညုဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်စွာ၊ ဂုဏ်ငယ်စေသော အပြုအမူ နှင့် အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် တစ်ရပ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးရန် တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာ သုံးသပ်ရေး ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အရေးကြီးအဆိုတစ်ရပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခြင်း
ဦးသိန်းအောင်၊ သံဖြူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ်က နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဋ္ဌာန်းပေးရေးအဆို တင်သွင်းခြင်း
ဦးသိန်းအောင်၊ သံဖြူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ်က နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အဆိုအား ဦးထွန်းထွန်းဦး (ဒုတိယရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး) မှ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
သူရဦးအောင်ကို၊ ကန်ပက်လက် မဲဆန္ဒနယ်မှ အရေးကြီးအဆို တင်သွင်းခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စား ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး (ဒုတိယရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး)မှ ပြန်လည် ဆွေးနွေးခြင်း၊ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
ဦးသိန်းညွှန့်၏ အဆိုအား ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်း (ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန) ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးသိန်းညွှန့်၏ အဆိုအား ဦးထွန်းထွန်းဦး(ဒုတိယရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး)မှ ဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်း
အထူးကာလစည်းကမ်းသတ်နှင့် အတိုးကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အား ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ)မှ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ဖြင့်ပေးပို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းထားသည့် တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက်ဆွေးနွေး၍ အတည်ပြုရန် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်သွင်းသော မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခြင်း
၁၉၄၅ ခုနှစ် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းအုပ်ထိန်းနိုင်သူ အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက် အဆိုတင်သွင်းထားသည့် တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက်ဆွေးနွေး၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
ဦးသိန်းညွန့်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်က အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်းကို လက်ခံဆွေးနွေးရန် အဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး က ထောက်ခံခြင်း
ဦးသိန်းညွန့်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်၏ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်းအား ဝန်ကြီးမှ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ဖြင့်ပေးပို့သော တရားရုံးများမထီမဲ့မြင်ပြုမှု ဥပဒေကြမ်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းထားသည့် တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက်ဆွေးနွေး၍ အတည်ပြု ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခြင်း
ဦးအောင်သောင်းတောင်သာမဲဆန္ဒနယ် မှ အဆိုတင်သွင်းခြင်း
ဦးအောင်သောင်းတောင်သာမဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုအား ဦးအောင်ကျော်စိုး(နတ်မောက် မဲဆန္ဒနယ်)မှ ထောက်ခံ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအောင်သောင်း၊ တောင်သာမဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး မှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအောင်သောင်း၊ တောင်သာမဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးခင်ဇော် ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအောင်သောင်း(တောင်သာမဲဆန္ဒနယ်)၏ အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
အဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌမှ သုံးသပ်တင်ပြခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများသို့ တိုက်တွန်းခြင်း
“ ပြည်သူများ ယုံကြည်ကိုးစားအားထားပြီး ဖြောင့်မတ်မှန်ကန် မျှတသည့် တရားစီရင်ရေး ဖြစ်ထွးန်စေရန် တရားသူကြီး၊ အမှုသည်နှင့် သက်သေများ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရေး ” အဆို တင်သွင်းခြင်း
ဦးဝင်းမြင့်၊ ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်က ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးခြင်း
ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က တင်သွင်းခြင်း ဥက္ကဋ္ဌ။	။ အစီအစဉ် ၁၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၅၄ နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကို တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၅၄ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီရဲ့ စိစစ်တွေ့ရှိမှုအစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၇၃ နည်းဥပဒေ (ဂ)အရ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့် အတည်ပြု ချက်ရယူခြင်း
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တင်သွင်းသော အဆိုများ၊ မေးခွန်းများ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောထားသုံးသပ်ချက်
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က တင်သွင်းသော တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဒေါက်တာစိုးမိုးအောင်(အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ)မှ ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခြင်း
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော KIO/KIA နှင့် အစိုးရတပ်များအကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများအား ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ အမြန်ဆုံးစတင်ဆောင်ရွက်ကြရေး တိုက်တွန်းချက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ဦးဝင်းစိန်(ကဝမဲဆန္ဒနယ်) တင်ပြခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မှ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် KIO/KIA သို့ တိုက်တွန်းချက်
“တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊စရိတ်နှင့်အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေကြမ်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီမှ ဦးခင်မောင်ရွှေက အစီရင်ခံစာ တင်သွင်း ခြင်း။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် KIO/KIA သို့ တိုက်တွန်းချက်
၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းအုပ်ထိန်းသူအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်း အစီရင်ခံစာအား ဦးခင်မောင်ညှိမှ တင်ပြခြင်း
၁၉၉၃ ခုနှစ် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ဒေါ်နန်းဝါနုမှ ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခြင်း
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ပေးပို့လာသော သဘာဝအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်း
‌ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီရဲ့စီစစ်တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်း
ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ စိစစ်တွေ့ ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို ဒေါက်တာစိုးမိုးအောင်မှ လွှတ်တော်သို့ဖတ်ကြား တင်သွင်းခြင်း
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး အဋ္ဌမနေ့မှတ်တမ်း(၅-၁၁-၂၀၁၂)
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး သတ္တမနေ့မှတ်တမ်း(၂၆-၁၀-၂၀၁၂)
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး ဆဋ္ဌမနေ့မှတ်တမ်း(၂၅-၁၀-၂၀၁၂)
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး ပဉ္စမနေ့မှတ်တမ်း(၂၄-၁၀-၂၀၁၂)
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး တတိယနေ့မှတ်တမ်း(၂၂-၁၀-၂၀၁၂)
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး ဒုတိယနေ့မှတ်တမ်း
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး
စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေးနှင့် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ကြားကာလ အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်မှားကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မှတ်တမ်းတင်
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအ‌ဝေး စတုတ္ထနေ့မှတ်တမ်း(၂၃-၁၀-၂၀၁၂)
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်တွင် အဆုံးအဖြတ်ရယူ
နိုင်ငံအဝှမ်းရှိ သစ်တောကြိုးဝိုင်းများ အတွင်းမှ	လယ်မြေ များအား ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသော လယ်ယာမြေများအဖြစ် ဆောင်ရွက် ပေးပါရန်” အဆိုတင်သွင်းခြင်း
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းသည့် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြား တင်ပြခြင်း
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းသည့် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ ကို ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ထောက်ခံခြင်း
အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီက ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံအား စွပ်စွဲပြစ်တင်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ လက်မှတ် ရေးထိုးတင်ပြ
ဦးသောင်း (မော်လိုက် မဲဆန္ဒနယ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဝင်းဆွေ (ညောင်ရွှေ မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း (ဝါးခယ်မ မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအုန်းကြိုင် (မဟာအောင်‌မြေ မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးထွန်းအောင်ခိုင် (ပေါက်‌တော မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
သဘာဝဝန်းကျင် တည်ငြိမ်မှု၊ ဂေဟစနစ်မျှတမှုကို ပြန်လည် ရရှိစေရေးနှင့် အမြဲတမ်း သစ်တောမြေများမှ သစ်နှင့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ ရေရှည်ထာဝစဉ် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ရှိ အရေးပါသော သဘာဝ သစ်တောကြီးများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုကို ဆွေးန
အဆိုရှင်၏ သဘောထား ဆွေးနွေးချက်နှင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
အရေးကြီးအဆိုတစ်ရပ်ကို ပူတာအို မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးယော်ဒီဒွေ့က တင်သွင်းခြင်း
မြေသိမ်း (သတ္ထုတွင်းများ) အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေမူကြမ်းအပေါ် လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအား ဖတ်ကြား
သဘာဝဝန်းကျင် တည်ငြိမ်မှု၊ ဂေဟစနစ်မျှတမှုကို ပြည်လည် ရရှိစေရေးနှင့် အမြဲတမ်း သစ်တောမြေများမှ သစ်နှင့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ ရေရှည်ထာဝစဉ် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ရှိ အရေးပါသော သဘာဝ သစ်တောကြီးများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုကို ဆွေးန
ဦးသိန်းလွင် ချောက်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအောင်သိန်းလင်းမှ အဆိုတစ်ခု တင်သွင်းခြင်း
ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဆွေ (ကျောက်တံခါး မဲဆန္ဒနယ်) က အဆိုတစ်ခု တင်သွင်းခြင်း
ကယားပြည်နယ် ရှားတောမြို့နယ်တွင် လိုအပ်သော ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများနှင့် အခြားလိုအပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန ကို လွှတ်တော်မှ တိုက်တွန်း
သူရဦးအောင်ကို တင်သွင်းသည့် စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အချို့ကို ပြင်ဆင် ပယ်ဖျက်ပေးပါရန် အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဦးကျော်နိုင်ဌေး (အင်းတော်မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
သူရဦးအောင်ကို တင်သွင်းသည့် စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အချို့ကို ပြင်ဆင် ပယ်ဖျက်ပေးပါရန် အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဦးသိန်းညွန့် (သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် (ပုလဲ မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအေး(ဟုမ္မလင်းမဲဆန္ဒနယ်) က ဒေါ်နန်းဝါနု၊ ကွန်ဟိန်း မဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုကို ထောက်ခံ ဆွေးနွေးခြင်း
တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများ၏ တာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဆိုကို ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် (မော်လမြိုင် မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများ၏ တာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဆိုကို ဒေါ်ခင်စောဝေ (ရသေ့တောင် မဲဆန္ဒနယ်)က ဆွေးနွေးခြင်း
တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများ၏ တာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဆိုကို ဦးစိုင်းသိန်းအောင် (တာချီလိတ် မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီမှ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် (မော်လမြိုင် မဲဆန္ဒနယ်)က တိုင်းရင်းဆေး ကောင်စီကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီမှ လေ့လာ စိစစ်တွေ့ရှိချက်အား အစီရင်ခံစာ ကို ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပေးပို့သော တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်းခြင်း
ဒေါ်ခင်မွှေးလွင်(မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးကိုကြီး (အောင်မြေသာဇံ မဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါ်ဝင်းမော်ထွန်း (ရေနံချောင်းမဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါက်တာ စိုင်းကျော်အုန်း (နမ့်ခမ်း မဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးသန်းဝင်း (တောင်တွင်းကြီး မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါက်တာအောင်သန်း (ရွှေဘိုမဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်က ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌမှ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ပြန်လည်သုံးသပ် တင်ပြခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူခြင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပေးပို့သော မြေသိမ်း (သတ္တုတွင်းများ) အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်းကို လက်ခံရရှိကြောင်း
မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါက်တာနေလင်း (ဆိပ်ကမ်းမဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
ဗိုလ်မှူးမြတ်မိုး (တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးပေါခင် (နွားထိုးကြီးမဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဝင်းမြင့် (မြင်းခြံမဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအောင်ကျော်စိုး (နတ်မောက် မဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများ မျက်စိ ဝေဒနာများစွာ ခံစားနေရမှုကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် ကုသပေးရန် အဆိုကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း
သာပေါင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းသန်းက အရေးကြီးအဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းခြင်း
ဦးဝင်းသန်းက အရေးကြီးအဆိုကို ဒေါက်တာစိုးရင် ကမာရွတ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ထောက်ခံ ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းမှ သာပေါင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းသန်း၏ အရေးကြီးအဆိုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရှင်းလင်းပြောချက်
လာတ်ပေးလာတ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခြင်း
ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း တင်သွင်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင်‌့ ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်း ပြုစုထားရှိရေး အဆိုနှင်‌့ စပ်လျဉ်းပြီး ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးခမိုင်မုံကွမ်က မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင်‌့ ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်း ပြုစုထားရှိရေး အဆိုကို ဆွးနွေးခြင်း
ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်မှ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရာယူခြင်း
လင်းခေး မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းလှကျော်က မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်းပြုစု ထားရှိရေး အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်းပြုစု ထားရှိရေး အဆိုကို ဦးထွန်းမြင့်ဦး မိုင်းပန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးစီခန်ရမ် (ခေါင်လန်ဖူးမဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိရေး ” အဆိုကိုဆွေးနွေးခြင်း
ဦးမောင်ညို (စစ်တွေမြဆန္ဒနယ်) က မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိရေး ” အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိရေး ” အဆိုကို ဦးခင်မောင်ဌေး (ထီလင်းမဲဆန္ဒနယ်) ကဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိရေး ” အဆိုကို ဦးကျော်သီဟ(ပြင်ဦးလွင်မဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိရေး ” အဆိုကို ဦးလှထွန်း (ခန္တီးမဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးနိုင်လှမောင်(ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်) က ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးစိုင်းဘိုးအောင်(မူဆယ် မဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိရေး ” အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ ကို ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ဥက္ကဋ္ဌမှ တာဝန်ပေးအပ်သူက ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခြင်း
ဒေါက်တာ စိုင်းကျော်အုန်း (နမ့်ခမ်းမဲဆန္ဒနယ်) မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်းပြုစု ထားရှိရေး အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်းပြုစု ထားရှိရေး အဆိုကို ဦးစောသိန်းအောင်က ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအောင်ကြိုင် (ညောင်ဦး မဲဆန္ဒနယ်) က မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်းပြုစု ထားရှိရေး အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း မှ မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်းပြုစု ထားရှိရေး အဆိုကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်းကို စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီမှ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခြင်း
အမျိုးသား လွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်မရှိ ပြန်လည်ပေးပို့ လာသော နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး အက်ဥပဒေအား ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေကြမ်းကို လက်ခံရရှိကြောင်း လွှတ်တော်သို့ အသိပေး တင်ပြခြင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပေးပို့သော တရားရုံးများ မထီမဲ့မြင်ပြုမှု ဥပဒေကြမ်းကို လက်ခံရရှိကြောင်း လွှတ်တော်သို့ အသိပေး တင်ပြခြင်း
ကသာခရိုင် တရားရုံးမှ စစ်ဆေး စီရင်ပြီး ပစ်ဒဏ် ချမှတ်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ စိစစ်သုံးသပ် ချက်ကိုဖတ်ကြား တင်သွင်းခြင်း
တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် ဖြောင့်မတ် ကြံ့ခိုင်စေရန် အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ထောက်မရေး” အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်မှ ဆွေးနွေးချက်
တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် ဖြောင့်မတ် ကြံ့ခိုင်စေရန် အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီထောက်မရေး” အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးကျော်နိုင်ဌေး (အင်းတော် မဲဆန္ဒနယ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး တရားသူကြီး ဦးမြင့်အောင်က တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် ဖြောင့်မတ် ကြံ့ခိုင်စေရန် အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီထောက်မရေး
တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် ဖြောင့်မတ် ကြံ့ခိုင်စေရန် အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီထောက်မရေး အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးထွန်းထွန်းဦး (ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ်)က ဆွေးနွေးခြင်း
ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့် (ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန) တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် ဖြောင့်မတ် ကြံ့ခိုင်စေရန် အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီထောက်မရေး အဆိုအား ဆွေးနွေးခြင်း
တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် ဖြောင့်မတ် ကြံ့ခိုင်စေရန် အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီထောက်မရေး အဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် သို့ သဝဏ်လွှာ ပေးပို့သွားမည်
ဦးအောင်မြသန်း (ညောင်တုန်း မဲဆန္ဒနယ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဘရှိန် ကျောက်ဖြူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဘင်ဂျန်းယန် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်ဒွဲဘူ မှဆွေးနွေးခြင်း
ဦးထွန်းအောင်ကျော်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဝင်းမြင့် (ပုသိမ် မဲဆန္ဒနယ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးသိန်းညွန့် (သင်္ကန်းကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်) မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေး
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ အပေါ် သူရဦးအောင်ကိုမှ သဘောထား ရှင်းလင်းခြင်း
ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် (မော်လမြိုင် မဲဆန္ဒနယ်) မှဆွေးနွေးခြင်း
ဦးထွန်းဆာ (တန့်ယန်း မဲဆန္ဒနယ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးမန်းဂျော်နီ (မြောင်းမြ မဲဆန္ဒနယ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအေးနိုင် (ဆင်ပေါင်ဝဲမဲဆန္နယ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ဖြင်‌့ ပေးပို့သော အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို လက်ခံရရှိ၊ ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ စာရင် တင်သွင်းနိုင်
နိုင်ငံတော် တာဝန်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးရေးနှင့် အမျိုးသားညီလာခံ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို နှောင့်ယှက်ဆန့်ကျင်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည့် ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ မှ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်
ပြည်သူ့အကျိုးပြု ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခြင်း
ဦးသောင်း (မော်လိုက်မဲဆန္ဒနယ်) မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း ရေးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
မိုင်းပန် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဦးသိန်းဆွေ၏ အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးသိန်းအောင် (သံဖြူဇရပ် မဲဆန္ဒနယ်) ဆွေးနွေးခြင်း
ဂွမဲဆန္ဒနယ် ဦးကြည်သာမှ ဦးသိန်းဆွေ၊ အမ်းမဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးထွန်းထွန်းဦး (ဒုတိယရှေ့နေချုပ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီးမှ ဦးသိန်းဆွေ၏ အဆိုပေါ် သုံးသပ်ပြောကြား၊ ဦးသိန်းဆွေမှ သဘောထား ကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူခြင်း
အမျိုးသား လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပေးပို့သော ၁၉၆၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်း ကော်ပိုးရေးရှင်း ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်
နိုင်ငံတော် ကောက်ပဲသီးနှံ ရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့ အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေမူကြမ်း နှင့်စပ်လျဉ်း ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီမှ ဖတ်ကြား ရှင်းလင်းခြင်း
ဦးသိန်းဆွေမှ ၎င်းတင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြည့်စွက် တင်ပြခြင်း
အစည်းအဝေး (၂၄) ရက်မြောက်နေ့ မှာ တင်သွင်းသည့် ဦးသိန်းဆွေ၊ အမ်းမဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးခင်မောင်ဦး (မုံရွာ မဲဆန္ဒနယ်) မှ အစည်းအဝေး (၂၄) ရက်မြောက်နေ့ မှာ တင်သွင်းသည့် ဦးသိန်းဆွေ၊ အမ်းမဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
NGO များ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော NGO များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဌာန်းနိုင်ရေး အဆိုအား ဦးစတီဖန် (ကျိုင်းတုံ မဲဆန္ဒနယ်) မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါ်စုစုလွင် (သုံးခွမဲဆန္ဒနယ်) မှ ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း (INGO) များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ တစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဆွေးနွေး
ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်(ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်) မှ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော NGO၊ INGO များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ခု ရေးဆွဲရေး အဆိုကို ဆွေးနွေး
ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော (INGO) များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ တစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဆွေးနွေး
ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော (INGO) များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ တစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးမှ ဆွေးနွေး
အဆိုရှင် ဦးသိန်းညွှန့် မှ ၎င်း၏ သဘောထား ကို ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌမှ ဦးသိန်းညွှန့် အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းနှင့် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း
သတ်မှတ်ချိန် ထက်နောက်ကျ၍ ဆွေးနွေးရန်တင်ပြလာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နည်းဥပဒေ ၁၅၇ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ရန် မသင့်ဟုယူဆ၊ ဆွေးနွေး ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း အသိပေး
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု
အစည်းဝေး (၁၇) ရက် မြောက်နေ့မှာ သင်္ဃန်းကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းညွန့် တင်သွင်းထားတဲ့ အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၄ ဦးက ယနေ့ စတင်ေ ဆွးနွေး
ဒေါ်ခင်သန္တာ (တံတားဦး မဲဆန္ဒနယ်) မှ (NGO) များ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း (INGO) များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ တစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဆွေးနွေး
အစိုးရမ ဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း NGO များ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း NGO များ၏ မှတ်ပုံတင် ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရအား ဤလွှတ်တော်မှ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဦးထွန်းအောင်ကျော် မှဆွေးနွေး
ဦးမန်းမောင်မောင်ဉာဏ်မှ အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း NGO များ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း NGO များ၏ မှတ်ပုံတင် ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရအား ဤလွှတ်တော်မှ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဆွေးနွ
ဒေါ်နန်းဝါနု (ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ်)မှ ဦးသိန်းညွှန့်၏ အဆိုအား ဆွေးနွေးခြင်း
အစိုးရမ ဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း NGO များ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း NGO များ၏ မှတ်ပုံတင် ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရအား ဤလွှတ်တော်မှ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဦးခိုင်မောင်ရည်မှ ဆွေးနွေးခြင
NGO များဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော အစိုးရမဟုတ်သော NGO များ မှတ်ပုံတင် ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ် ပြဌာန်းနိုင်ရေး အဆိုအား ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါက်တာ ဇော်မြင်‌့မောင် မှ NGO များ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း NGO များ၏ မှတ်ပုံတင် ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရအား လွှတ်တော်မှ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဆွေးနွေ
NGO များ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော NGO များ၏ မှတ်ပုံတင် ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရအား လွှတ်တော်မှ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)မှ ဆွေးနွေး
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် အခွင့်အရေးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုရန်တိုက်တွန်း
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများ၏တာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို တိကျစွာ သတ်မှတ်၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေမူကြမ်းအဖြစ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ ဆောလျင်စွာ တင်သွင်းရေး နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုကို တင်သွင်း
ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူး ကိစ္စရပ်များ လေ့လာ ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်တွင် အဖွဲ့ဝင်များ ထပ်မံခန့်အပ်
ဥပဒေကြမ်းကော်မတီမှ စာမျက်နှာ ၁၊ အပိုဒ် (၂)၊ စာမျက်နှာ ၁၊ အစီအစဉ် ၂၊ ၃ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင် ရေးသားမှု ရလို့ရှိရင် တင်ပြပါ။
နိုင်ငံခြား မတည်ငွေရင်း ရာခိုင်နှုန်း အပြည့် လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိသော ကန့်သတ် လုပ်ငန်းများတွင် အနည်းဆုံး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ခွင်‌့ ပြုပြီး အများဆုံး ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ကန့်သတ်ထားသည့် အနေဖြင့် ဖြည့်စွက်ခြင်း
ဦးအောင်သိန်းလင်း တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒနယ်မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်းအား ပြင်ဆင်ချက် အဆို တင်သွင်း
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်း ကို ပြင်ဆင်မှု ဆက်လက်ဆောင်ရွက်
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်းတွင် နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားများအတွက် လိုအပ်သော ခေတ်မီ ဝန်ဆောင်မှူများ ပေါ်ပေါက်လာ စေရေး အ‌ခြေခံမူ ထည့်သွင်း
ဦးခင်မောင်ဦး မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှိးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်းတွင် ဆွေးနွေးခြင်း
စီးပွား ကုန်သွယ်ရေး ကော်မတီက ဆွေးနွေးခြင်း
ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးစတီဖန် မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဝင်းဦး ရေဖြူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်း ကို ပြင်ဆက်ချက် အဆို ဦးဝင်းဦး ရေဖြူမဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
အမှတ်စဉ် (၁၅) ဥပဒေကြမ်းကော်မတီမှ ပြင်ဆင်ချက် အဆို တင်သွင်းခြင်း
ဒေါက်တာဝင်းမြင့်၊ လှိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြင်ဆင်ချက် အဆို တင်သွင်
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်း တွင် ဦးအေးမြင့် (အင်းစိန်မဲဆန္ဒနယ်)မှ ပြင်ဆင်ချက် အဆိုတင်သွင်း
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်း အား ဆက်လက် အတည်ပြုခြင်း
အခန်း (၂) အပိုဒ် ၄ (ဍ) အား ပြင်ဆင်ချက် အဆိုတင်သွင်း
ဦးဝင်းဦး (ရေဖြူ မဲဆန္ဒနယ်) မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေကြမ်းတွင် ပြင်ဆင်ချက် အဆိုတင်သွင်း
ဦးစိုးသာ (တွံတေး မဲဆန္ဒနယ်) မှ ပြင်ဆင်ချက် တင်သွင်းခြင်း
ခေတ်မီ IT အစား ခေတ်မီ သတင်း အချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ICT အဖြစ် ပြင်ဆင်ရန်
ဦးခင်မောင်ဦး၊ မုံရွာ မဲဆန္ဒနယ်က ပြင်ဆင်ချက် အဆို တင်သွင်းခြင်း
ဦးခင်မောင်ဦး (မုံရွာ မဲဆန္ဒနယ်) မှ ပြင်ဆင်ချက် အဆို ဆက်လက် တင်သွင်း
အခန်း(၁) အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ (ဈ) (၂) ၏ ပြင်ဆင်ချက် အား ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှ သဘောတူ
အခန်း (၁) အပိုဒ် ၂ အပိုဒ်ခွဲ (ဋ) ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီရဲ့ ပြင်ဆင်ချက်အား ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြသန်းမှ တင်သွင်းခြင်း
ဦးဝင်းမြင့်၊ ပုသိမ် မဲဆန္ဒနယ်၏ Good governance၊ Clean government ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တို့၏ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း၊ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းနှင့် အကျိုးစီးပွားများ ကို ထုတ်ဖော်ကြေညာပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရန် အဆိုကို ယနေ့ဆွေးနွေး
ဦးဝင်းမြင့် ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်၏ အဆိုကို ဦးစိန်ဝင်း (မအူပင်မဲဆန္ဒနယ်)မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးကျော်မင်း လက်ပံတန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဝင်းမြင့် ရဲ့ Good Governance ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး၊ Clean Government သန့်ရှင်းသောအစိုးရ ဖြစ်ပေါ်စေရေး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ရွေ့ပြောင်းနိုင်/ မရွေ့ပြောင်းပစ္စည်းများနှင့် အကျိုးစီးပွားတွေကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာ မှတ်တမ်းတင်ရန်အဆိုအားဆွေးနွေးခြင်း
ဦးစိုးဝင်း (စမ်းချောင်းမဲဆန္ဒနယ်) မှ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင် ပစ္စည်းများနှင့် အကျိုးစီးပွားများ ထုတ်ဖော်ကြေညာပြီး စာရင်းပြုစုထားရန်အဆိုအား ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဝင်းမြင့်၏ အဆိုကို ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ Good governance, Clean governance နှင့် ပတ်သက်သော အဆိုအား ဆွေးနွေး
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်ထွန်း မှ ဦးဝင်းမြင့်အဆိုအား ဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို တင်သွင်း
ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာ ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်တွင် အဖွဲ့ဝင် အသစ်များ ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
ဒေါက်တာသန်းဝင်း၏ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်း၍ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှု မြှင့်တင်ရေး စီမံချက်ချ ဆောင်ရွက်ပါရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
ကလောမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းငွေမှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဒေါက်တာသန်းဝင်း၏ ယဉ်းကျေးမှု စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း၍ ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေး စီမံချက်ချ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုကို ဦးဝင်းထိန် မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးမြင့်ရွှေ (ဝေါမဲဆန္ဒနယ်)မှ ဒေါက်တာသန်းဝင်း၏ အဆိုကိုဆွေးနွေး
ဒေါက်တာသန်းဝင်း တင်သွင်းသည့် မြန်မာ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အဆိုကို ဦးအောင်ကြိုင် ညောင်ဦးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေး
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်စန္ဒာခင်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသန်းဝင်း၏ အဆိုနှင့် ပက်သတ်၍ ရှင်းလင်း ဖြေကြားခြင်း
နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဌ ဦးဌေးဦးအား ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Tomas Ojea Quintana နှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ဦးသိန်းညွန့်၏ မကြာခင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေ
ဦးသိန်းညွှန့်၏ အဆိုကို ဦးခိုင်မောင်ရည်မှ ထောက်ခံဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်မှ သင်္ဃကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းညွှန့်၏ အဆိုအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးပါရန် လွှတ်တော်သို့တင်ပြ
ဦးသိန်းညွှန့်၏ အဆိုအား ကန့်ကွက်မဲများသည့် အတွက် အတည်မပြုကြောင်း လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်
မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း စွယ်စုံကျမ်း ထားရှိရေး အဆိုကို ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းမှ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်း
ဒေါ်တင်နွယ်ဦး၏ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို အကျိုးပြုစေရန် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပီပြင်စွာ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးဆောင်ရွက်တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို ယနေ့ဆွေးနွေး
ဒေါ်တင်နွယ်ဦး၏ ဈေးကွက်စီးပွားရေး ပီပြင်ရေး အတွက် နိုင်ငံပိုင် အလုပ်ရုံများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပုဂ္ဂိလပိုင်ပြုလုပ်ရေးဆိုကို ဒေါ်စန္ဒာမင်းမှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးကြည်သာ (ဂွမဲဆန္ဒနယ်)မှ ဒေါ်တီနွယ်ဦးတင်သွင်းသည့်အဆိုကို ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အကျိုးပြုစေရန် ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်ပီပြင်စွာ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ် ရုံများ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုဆွေးနွေး
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ Migration Workers များရဲ့ ဘဝ အာမခံချက်နှင့် လုံခြုံမှုရရှိရေးအတွက် Migration Policy ချမှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် အဆိုတင်သွင်း
တက္ကသိုလ်ပညာရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေး
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ထောက်ခံဆွေးနွေး
ဦးတီခွန်မြတ်၏ အဆိုကို ဘားအံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်နန်းစေအွာ ဆွေးနွေးခြင်း
မိုင်းရှုးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးကျော်တင်ရွှေမှ ဆွေးနွေးခြင်း
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုကိုထောက်ခံတင်ပြ
မလမ်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခွန်လိန်း ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးတီခွန်မြတ်၊ ကွတ်ခိုင် မဲဆန္ဒနယ်၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အဆိုကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များယနေ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေး
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့သော သွင်းကုန်ပို့ကုန် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
ဦးတီခွန်မြတ်၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုကို လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု
ဦးထွန်းထွန်းဦး ဒုတိယရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇံမြင့် (ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန) မှ ထောက်ခံဆွေးနွေး
လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းမှ ဦးတီခွန်မြတ်၏ အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း
ဦးကျော်နိုင်ဌေးက ဦးတီခွန်မြတ်ရဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ
ဦးမန်းမောင်မောင်ဉာဏ် (ပန်းတနော်မဲဆန္ဒနယ်) မှဆွေးနွေးခြင်း
ကွတ်ခိုင်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတီခွန်မြတ်တင်သွင်းသွားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင်‌့ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုကို ထောက်ခံဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန် အဆိုတင်သွင်း
ဦးတီခွန်မြတ် တင်သွင်းသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေး အဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဦးခွန်မောင်သောင်းမှ ထောက်ခံဆွေးနွေးသွား
ဦးထန်းလိန်း မင်းတပ်မဲဆန္ဒနယ်မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုကို ဆွေးနွေး
ဦးတီခွန်မြတ်၏ အဆိုကို မူဆယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ ဆက်လက်ဆွေးနွေး
ဦးတီခွန်မြတ်၊ ကွတ်ခိုင်မဲဆန္ဒနယ်၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမနေ့တွင် ဦးတင်ထွတ်၏ အဆိုကို ထောက်ခံ
ဦးဝင်းမြင့် ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ် မှ (Good Governance) ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး၊ (Clean Government) သန့်ရှင်းသောအစိုးရဖြစ်ပေါ်စေရေး အတွက် အဆိုတစ်ခုတင်သွင်း
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့် ရှောက်သည့်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း ရေးအဆိုကို ဦးရွှေမောင်မှ ထောက်ခံဆွေးနွေးခြင်း
ဦးမင်းသူ ဥတ္တရသီရိမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတီခွန်မြတ်၏ အဆိုကို ထောက်ခံဆွေးနွေး
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေး အဆိုကို ဦးကျော်သီဟမှ ထောက်ခံဆွေးနွေးခြင်း
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ အခွင်‌့အရေးကို ကာကွယ်သော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုကို ဦးအုန်းကြိုင်မှ ဆွေးနွေး
ဦးတီခွန်မြတ်တင်သွင်းသော အဆိုကို ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဆွေးနွေး
ရသေ့တောင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်ခင်စောဝေမှ ဆွေးနွေးခြင်း
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဆိုကို ဆွမ်ပရာဘွမ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခမိုင်မုန်ကွမ် (ခ) ဦးခမိုင်တန်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
အင်ဂျန်းယန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်ဒွဲဘူမှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရေး အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဆွေးနွေး
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရေး အဆိုကို ဦးရှိသီး လေရှီးမဲဆန္ဒနယ်မှ ဆွေးနွေးခြင်း
ဦးအေး၊ ဟုမ္မလင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတီခွန်မြတ်၏ အဆိုကို ဆွေးနွေး
ဦးတီခွန်မြတ်၏ “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပြဌာန်းရေး” အဆိုကို ဒေါ်ဇာတလဲမ်း မှဆွေးနွေး
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဌမနေ့ အစည်းအဝေးမှာ တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအောင်သိန်းလင်း တင်သွင်းထားတဲ့ တောင်သူ လယ်သမားများ အများဆုံး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြွေကိုက်ခံရခြင်း အတွက်လိုအပ်သည်‌့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး များကိုနိုင်ငံ ပိုင်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံမှ လုံလောက်စွာ ထုတ်လု
မတရားအသင်းများအက်ဥပဒေ (၁၉၀၈ ခုနှစ် အိန္ဒယအက်ဥပဒေ-၁၄) ကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန် အဆို တင်သွင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းမှ ပြောကြားရာ ၁၃.၇. ၂၀၁၂ ရက်နေ့၌ ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသူ ဒေါ်နန်းဝါနု၏ အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း
ဒေါ်နန်းဝါနု၏ အဆိုကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုကြောင်းသတင်းရရှိ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌမှ ဒေါ်နန်းဝါနု တင်သွင်းသည့် အရေးကြီး အဆိုကို ဖြည့်စွက် ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းဝါနုမှ အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းပါသည်။